Hordhaca bayer munich iyo Lazio wax badan ka ogoow kahor Kulankaan.
Home Champions League Hordhaca bayer munich iyo Lazio wax badan ka ogoow kahor Kulankaan.
Kooxaha Bayern munich iyo Lazio ayaa caawa wada ciyaari doonaan kulan qeyb ka ah champions league kooxda difaacaneysa Koobka ee bayer ayaa caawa Marti ku ah carada talyaaniga waana Lugta Koobaad.
Tani waa kulanki ugu horreeyay ee tartan ah oo dhexmara Lazio iyo Bayern Munich. Lazio ayaa laga badiyay kaliya mid ka mid ah lixdii kulan ee ay ciyaareen Champions League ee ay la ciyaareen kooxda Jarmalka (W2 D3) waxaana ay ku sii nagaadaan gurigooda.
Bayern Munich ayaan laga badinin shantii kulan ee ugu dambeysay Champions League ee ay ka horyimaadeen kooxaha kasocda wadanka Italy 3 guul 2 barbaro. Labadii booqasho ee UCL ee Stadio Olimpico waxay soo dhaliyeen 13 gool, oo ay ku jirto guushii 7-1 ee ay ka gaareen Roma bishii Oktoobar 2014.
Lazio ayaa ku jirta wareega 16ka ee UEFA Champions League markii ugu horeysay muddo 21 sano ah waxaa ugu dambeysay (1999/00), waana farqiga ugu dheer ee abid koox mogaata mudo intaas dhan marxaladaha dambe ee tartanka.
Bayern Munich ayaa gaartay wareega 13 jeer ee isku xigta, kaliya Real Madrid oo 24 jeer ah iyo Barcelona oo 17 jeer ah ayaa haatan socda. Waxay u gudbeen wareega quarter-finalka 10 ka mid ah 12kii olole ee hore.
Tan iyo xilli ciyaareedkii hore, Bayern Munich ayaa guuleysatay 16 ka mid ah 17kii kulan ee UEFA Champions League haljeer kaliya ayeey barbardhac galeen iyadoo guud ahaan goolasha ay ku kala duwan yihiin +48 61 gool, 13 ay ka horyimaadeen taasi waa afar guul oo ka badan kooxaha kale muddadaas.
Bayern Munich ayaa kaliya ku guuldareysatay inay dhaliso hal jeer 27kii kulan ee ugu dambeysay ee UEFA Champions League ciyaar 0-0 ku dhamatay aya yeeshen Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka Anfield bishii Febraayo 2019 halka Lazio aysan haynin warqad nadiif ah 17kii kulan ee ugu dambeysay tartanka, markii ugu dambeysay ee sidaas la sameeyo 17 sano ka hor, bishii Sebtember 2003 kooxda Besiktas (2-0).
Goolasha laga filayo Bayern Munich ee ka dhanka ah waa 9.08 lixdii kulan ee ay ciyaareen ayaa ahaa kii labaad ee ugu sareeyay ka dib Mönchengladbach (11.77) oo ka mid ah kooxaha ka haray tartankan xilli ciyaareedkan, iyadoo Manuel Neuer uu sameeyay badbaado ka badan goolhayeyaasha kale intii lagu jiray wejiga kooxda waana 27 badnaadin.
Lazio ayaa badisay kaliya labo ka mid ah lixdii kulan ee ay ciyaareen Champions League xilli ciyaareedkan, waana kooxda ugu hooseysa ee u soo baxday wareega 16ka oo ay wehliyaan Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach).
Lazio ayaa dhalisay oo laga dhaliyay ugu yaraan hal gool mid kasta oo ka mid ah 12-kii kulan ee ugu dambeysay ee UEFA Champions League, kaasoo ugu horreeyay koox taariikhda tartankan.
Ciro Immobile ayaa dhaliyay sideed gool sagaalkiisii Champions League halka mid kasta oo ka mid ah seddexdii gool ee ugu dambeysay ee tartankan uu ka yimid rigoorada. Shantiisii gool ee xilli ciyaareedkan ayaa ah soo laabashada ugu fiican ee ciyaaryahan Talyaani ah oo ku jira ololaha UCL tan iyo Alessandro Del Piero 2008/09 sidoo kale 5 gool dhaliyey.
Weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa dhaliyay 31 gool 33 kulan oo UEFA Champions League ah tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2017/18 waana in ka badan ciyaartoy kale mudadaas Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey 29 gool 34 kulan uu ciyaaray.
20% dhamaan goolasha UEFA Champions League ee ay dhaliyeen ciyaartoy Lazio ayaa ka yimid macalinka haatan Simone Inzaghi (15 ka mid ah 75). Waxa uu sidoo kale ahaa gooldhaliyahooda ugu sareeya markii ugu dambeysay ee Lazio at gaarto wareega 16ka ee tartanka 9 gool goo ayuu dhaliyey xilli ciyaaredkii 1999/00 kuna darso haatan waa macalinka kooxda.
Ciyaartan ayaa la daawan doonaa caawa shanta saac waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka caanka ah Stadio Olymbico oo ah garoonka Lazio waxaa ciyaartaan garsoori doono Orel Grinfield.
Previous articleWaa kuma 5 ciyaartooy Afrikaan ah oo leh goolasha ugu badan ee La Liga
Next articleKooxo badan oo isku heystaan in qaab xor ah ku helaan Aguero hadaba miyeey kooxdaada ku jirtaa.